[Phambi kweSitishi sase-Anshan] I-110-intshi ecacileyo yesikrini esikhulu / indawo yentengiso phambi kwesikhululo / isikhululo sabakhweli kwisikhululo sikaloliwe / umbono ophakamileyo wobusuku / ubushushu bomgangatho ovaliweyo / iNordic ins umgangatho wegumbi elinye lokulala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu棉花堂之家
Ngononophelo kuzo zonke iinkcukacha, zixhotyiswe ngeeseti zangasese ezilahlwayo kunye neekomityi zamanzi ezilahlwayo, iimpahla zehotele eneenkwenkwezi ezintlanu, amagumbi akrelekrele kakhulu, axhotyiswe ngezitshixo ezilumkileyo, kunye nokufudumeza umgangatho.
Ifumaneka eWanxi City Plaza phambi kwesikhululo saseAnshan, ekudibaneni kwehotele iBMW kunye neTianhe Building, kufutshane neAnshan Railway Station, Anshan Passenger Transport Terminal, kunye neAnshan Station Front Front Commercial Street. Xa uhlala apha, awunyanzelekanga kukhathazeka malunga ayinalo uloliwe kwakhona. uyakwazi ukufikelela Station Anshan e kwemizuzu emi-5, yaye ukuthuthwa elijikelezileyo lula. i Anshan City Bus hub wehla, nto leyo ukufikelela ngqo kuzo zonke iindawo esixekweni.
Igumbi lixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba, ifriji, i-air-conditioning kunye nezinye iindawo zokuhlala, umgangatho owaneleyo wokufudumeza ebusika, ikhitshi evulekileyo, i-1.8 × 2m ibhedi yaseYurophu, i-110-inch 1080p XGIMI oyintandokazi yeprojekti, kunye ne-4k isikrini esicacileyo se-ultra-clear. , ngezibonelelo movie kunye TV enkulu, Mango ilungu configures tv VIP ukubukela izibonelelo movie yakutshanje. Icafe ye-Intanethi ye-27-intshi yekhompyuter enezixhobo eziphezulu kunye ne-100M ye-wifi enesantya esiphezulu, khetha ijeli yeshawa esebenza ngokuzimeleyo ye-JD, ishampu, i-conditioner, njl.njl., lukhetho olufanelekileyo kuhambo lweshishini, iofisi, kunye neholide.
Igumbi ligumbi lokulala elikhulu elihonjiswe ngohlobo lwaseYurophu, licocekile kwaye licocekile.Ibhedi kunye neetawuli zokuhlambela zitshintshwa kundwendwe ngalunye.Ibhedi enkulu etofotofo yaseYurophu idityaniswe nefanitshala yohlobo lweenkwenkwezi ezintlanu, nto leyo eyenza ukuba igumbi lonke libukeke limdaka. Kumnandi ngakumbi kwisibane esisecaleni kwebhedi sepak takraw. Ngorhatya, eyona mbono intle yasebusuku yase-Anshan inombono wepanorama. Ukuhlala ngasefestileni uncokola kwaye wonwabele imbonakalo, bekungekhe kubemnandi ngakumbi.
Zonke ziinkwenkwezi ezintlanu zokuhombisa. Ulwakhiwo oluzenzekelayo, ubukrelekrele, kunye nesitshizi somlilo zonke ziyafumaneka. Ukubek' iliso kwipatroli yokhuseleko lweeyure ezingama-24, ngokusekelwe kwimigangatho ephezulu yepropathi. Urhwebo lolungelelwaniso lweelevator luya kukukhulula kumakhamandela okulinda.
Qaphela: Olu hlobo lwegumbi lunconywa kubantu abayi-1-2.
Imithetho yokungena: Umhlali kufuneka abambe ikhadi lakhe lesazisi ukuze ahlole. Nceda ungafaki iodolo ngaphandle kwekhadi lesazisi. Idiphozithi ye-intanethi yi-yuan engama-200. Igumbi alinakusetyenziselwa ukupheka, amagumbi omtshato, iindibano kunye nabangaphantsi kweminyaka yobudala. abantwana abavumelekanga.
Ukuba uza kuhlaziya isivumelwano sokuqeshisa, kufuneka uqhagamshelane nomnini-mhlaba ukuze afake iodolo kwangaphambili.
Indawo yokupaka ingakhetha phakathi kwentlawulo nesimahla ekufutshane.
Malunga neemitha ezingama-50 ukusuka kwisitrato esisembindini wedolophu, imizuzu emi-3 ukuhamba ukuya kufika
Kumgama oziimitha ezingama-50 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe i-Anshan, umgama oziimizuzu emi-3.
Iimitha ezingama-50 ukusuka kwisikhululo sebhasi i-Anshan, uhambo lwemizuzu emi-3
Imalunga neemitha ezingama-20 ukusuka kwisikhululo sebhasi kunye nokuhamba ngomzuzu omnye.
Iimitha ezili-100 ukusuka kwindawo yokumisa ibhasi yeQianshan Scenic Area, imizuzu emi-5 ukuhamba ukuya kufika
Imalunga ne-1.8 yeekhilomitha ukusuka eYufo Mountain Scenic Area-Eryjiu Park, kwaye kuthatha malunga nemizuzu eli-15 ukuya kuyo ngeenyawo.
Umbuki zindwendwe ngu- 棉花堂之家
Ngexesha lokuhlala kwakho, ukuba awuyazi into omawuyenze, nceda uqhagamshelane nam nangaliphi na ixesha
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Anshan